महिलाहरुले यसरी खोसेका थिए प्रहरीको बन्दुक — Imandarmedia.com
महिलाहरुले यसरी खोसेका थिए प्रहरीको बन्दुक
जन्मदेव जैसी ।
०५४ सालको २६ चैत्रको दिन । बसन्त ऋतुको आगमन हुँदैथियो । विथल डाँडामा पलाएका पालुवा र कोइलीको समधुर गीतले सधैको नियमिततालाई क्रमभंग गर्नै लागेको अनुभूति दिइरहेको थियो । नेपाली जनयुद्धको दोश्रो वार्षिकीको रौनक सिद्धिएको थिएन ।
एकातिर मनमोहक वातावरण अर्कोतिर पुरानो सत्ताको प्रहरीले गर्ने गस्तीले बस्ती आतंकित । त्यो दिन कालिकोटको माल्कोटस्थित विथल डाँडामा त्यही प्रवृति भयो । जनयुद्ध पश्चात भरखर क्रान्तिको बिउ रोपिदै थियो त्यहाँ । जनताको जनविद्रोहबाट अतालिएको पुरानो सत्ता जनयुद्ध रुपि बिरुवा निमोट्न देशै भरी विभिन्न षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको थियो ।
लेखक- जन्मदेब जैसी
२०७४ मंसीर ७ गते प्रकाशित
के छ प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनमा ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठ)
चीनमा जन्मियो माओवादी पार्टी, यस्तो छ १० बुँदे घोषणापत्र
प्रहरीको गोली खानुअघि विवेकले भनेका थिए-‘म मर्दा दुनियाँले हाई हाई गरुन्’, हेर्नुहोस् मार्मिक स्टाटस !
सहिद परिवारको प्रश्न: ‘लुट धन्दा चलाउन गाउँपालिका केन्द्र फेर्न पाइन्छ र प्रमुख ज्यू ?’
जीवनको अन्तिम क्षणमा चे ग्वेभाराले फिडेल क्यास्त्रोलाई लेखेको अन्तिम पत्र यस्तो थियो
चुनावको मुखैमा एमाले अध्यक्ष ओलीले किन लेखे यस्तो पत्र ?